Whatsapp kombiyuutarka, baro sida loogu isticmaalo kombiyuutarkaaga | Wararka Gadget
Whatsapp loogu talagalay pc
Intee in le'eg ayaan ku riyoonay inaan karno adeegsiga Whatsapp for pc. Suurtagalnimada ayaa nooga timid gacanta WhatsApp Web, sidan oo kale, waxaan bilownay inaan karti u yeelano inaan u adeegsanno WhatsApp-ka Windows PC kumbuyuutar kasta, waxaan si fudud ugu qasbanaanay inaan ku xirno qalabkeena moobilka WhatsApp Web.
Si kastaba ha noqotee, waa shaqo had iyo jeer badhkeed soo martay, markaa adeegsadayaashu waxay dalbadeen codsi asal ah, barnaamij aan ku rakibi karno inaan ka wada hadalno WhatsApp kombuyuutarkeena iyada oo aan loo baahnayn in la furo biraawsar kasta, iyadoo la adeegsanayo tamarta iyo ilaha ay tani ka dhigan tahay . WhatsApp waxay go'aansatay inay tallaabo qaado, waana taas sababta, bishii Maarso 2016, WhatsApp waxay bilaabeen codsi kombuyuutarka ah oo Isbaanish ah, kaas oo adoo rakibaya, noo oggolaanaya inaan kula sheekaysano dhammaan xiriiradayada WhatsApp si dhakhso leh oo fudud, waxaan kuu sheegi doonaa sida.
1 Ku soo dejiso WhatsApp kombiyuutarka
2 Sida WhatsApp loogu rakibo kombuyutarkaaga
Ku soo dejiso WhatsApp kombiyuutarka
Haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan u soo dejino WhatsApp kombuyuutarka, hanaanku ma sahlanaan laheyn, WhatApp ayaa karti yeelatay qayb cusub oo ku saabsan boggaaga rasmiga ah. Markii aan soo galno, degelku wuxuu ogaadaa nidaamka hawlgalka aan adeegsanayno, iyo habka aan ku rakibno WhatsApp ee Windows PC habka ugu fudud, laakiin intaas kaliya maahan, dalabku wuxuu sidoo kale la jaan qaadayaa Mac OS X.
La Codsiga WhatsApp wuxuu ku habboon yahay Windows 8, Windows 8.1 iyo Windows 10, iyagoo furaya fursado badan oo la xiriira iswaafajinta, maadaama ay yihiin nidaamyo shaqeynaya.
Sida WhatsApp loogu rakibo kombuyutarkaaga
Hadda waxa muhiimka ahi waa in la ogaado sida WhatsApp loogu dhigo PC, mana noqon karin wax fudud. Mar haddii WhatsApp-ka Windows-ka laga soo dejinayo barta aan horay u soo sheegnay, waxaan si fudud ugu tagnaa galkeenna "downloads" oo aan ku fulinnaa faylka .exe ee la soo dejiyey. Markii rakibaadda la dhammeeyo, waxaan bilaabi doonnaa barnaamijka, si ay howsha u bilawdana, waxaan raaci doonnaa isla tallaabooyinka la midka ah kan WhastApp Web.
Taasi waa, waxaan tagnaa goobaha WhatsApp ee taleefankeena casriga ah oo waxaan gujineynaa ikhtiyaarka "WhatsApp Web", sida tan kaamirada ayaa furi doonta waxaana baari karnaa koodhka "Bidi" taasi waxay ina tusaysaa shaashadda kombuyuutarkayaga. Laga bilaabo xilligaas, waxaan ku isticmaali karnaa WhatsApp kombuyutarkayga sidii inuu yahay dalabka.